गाजा बेच्दा बेच्दै ६० बर्ष कि आमा प’क्राउ:: Mero Desh
गाजा बेच्दा बेच्दै ६० बर्ष कि आमा प’क्राउ
Published on: ५ जेष्ठ २०७८, बुधबार ०८:३६
नेपालमा रोजगार छैन! केही मजदुर गरेर खाउ भने पनि लकडाउनले बाहिर नि’स्कन पाउदैन मजदुर हरु लाई सरकार प्रति ध्यान छैन के गर्नु पापी पेट पाल्नै पर्यो! भन्दै बुढी आमा प’शुपतिको छेउमा गा’जा बेच्दा बेच्दै नेपाल प्र’हरीले प’क्राउ गरेका छन ! छोरा पाल्दैन म ज्यामी काम गर्न सक्दिन चोरेर खान मिल्दैन गाजा बेच्ने आमा
बुढि आमा भन्नू हुन्छ लकडाउन छ घर जान सक्दिन नत्र भए पोखरा गै सक्थे ! यो पनि बाध्यताले आज मात्र अरु कसै बाट लिएर बेचेको हो अब देखि म बेच्दिन रुदै भन्छिन् तर पनि नेपाल प्रहरी यस्तो लकडाउन छ लाज छैन अब हिन्नु होस हामी संग भन्दै गाडीमा लगाउछन !
उनी रुदै भन्छिन म मेरो घर पनि देखाउछु आज मात्र हो यहाँ बेचेको अरु छैन अब देखि यस्तो गर्दिन ! तर पनि पुलिस चेक गरि रहन्छ अरु पनि निकाल्नु होस नत्र महिला प्रहरी बोलाएर चेक गर्न लगाउछु भनेर ड’र देखाउछन तर पनि हात जोडेर कसम खादै भन्छन् यति हो !
हतारमा आत्तिएर रुदै सबै गोजि खोतालेर देखाउछन ! अनि आफै चिच्याउन थाल्छन् आज मैले किन किने होला यो गाजा अझ दुई तीन जनाले पैसा नतिरी लिएर गाको छन बुढी आमा भन्दै म के गरौ भन्नू हुन्छ भिडियो अन्तिम मा छ !
यो पनि: बिश्व बजारमा गाजा लाई राम्रो प्राथमिकता छ ! बिज्ञ हरु गाजाको धेरै अनुसन्धान मा छन !गाजाको अनेक प्रोडक हरु निकालेका विद्वान हरु बताउछन् नेपालमा पनि केही बिज्ञ हरु गाजा मास्ने होइन गाजा लाई बि’श्व बजार मा पुराउने सल्लाह दिन्छन् त’सर्थ यस बिसयमा नेपाल सरकार को ध्यानाकर्षण छैन!